Izindaba - Izibani zamandla elanga
1. Manje izibani zelanga zihlala isikhathi esingakanani?
Ngokuvamile, amabhethri amalambu angaphandle elanga angalindelwa ukuthi angahlala cishe eminyakeni engu-3-4 ngaphambi kokuthi adingeke ukuthi ashintshwe. Ama-LED ngokwawo angahlala iminyaka eyishumi noma ngaphezulu.
Uzokwazi ukuthi sekuyisikhathi sokushintsha izingxenye lapho amalambu engakwazi ukukhokhela ukukhanyisa indawo ebusuku.
Kunezici ezimbalwa eziguquguqukayo ezingathinta nokuphila kwamalambu akho elanga angaphandle.
Kokunye, ukubekwa kwabo maqondana nokunye ukukhanyisa kokufakelwa kunganciphisa noma kuthuthukise impilo yabo ende. Qiniseka ukuthi amalambu akho elanga angaphandle abekwe elangeni eliqondile buqamama nokukhanya kwasemgwaqeni noma ukukhanyiswa kwendlu, ngoba ukusondela kakhulu kwento eseduze kungalahla izinzwa ezibenza bakhahlele ekukhanyeni okuphansi.
Ngaphandle kwendawo akuyo, inhlanzeko yamaphaneli elanga nayo ingaba nomthelela ekugcineni ukukhanya kwelanga. Ikakhulukazi uma unezibani zakho eziseduze nensimu noma enye indawo ejwayelekile engcolile, qiniseka ukuthi usula amaphaneli njalo ngesonto ukuze zithole ukukhanya kwelanga okwanele.
Ngenkathi izinhlelo eziningi zokukhanyisa zenzelwe ukumelana nezinhlobonhlobo zezulu nesimo sezulu, zisebenza kahle kakhulu lapho zingathola usuku olugcwele lokukhanya kwelanga futhi azikho engcupheni yokumbozwa yiqhwa noma ukudilizwa yimimoya enamandla. Uma ukhathazekile ngesimo sezulu ngezikhathi ezithile zonyaka ezithinta amalambu akho elanga, cabanga ngokuwagcina ngalezi zikhathi.
2. Kuhlala isikhathi esingakanani amalambu elanga ehlala ekhanya?
Uma amalambu akho elanga angaphandle athola ukukhanya kwelanga okwenele ukukhokhiswa okugcwele (imvamisa cishe amahora ayisishiyagalombili), azokwazi ukukhanyisa ubusuku bonke, aqale lapho ukukhanya kuphansi, lapho kuzoshona ilanga.
Kwesinye isikhathi amalambu ahlala isikhathi eside noma amafushane, inkinga engahle ibangelwe ukuthi amaphaneli akwazi kanjani ukuncela ukukhanya. Futhi, ukuhlola ukuqinisekisa ukuthi amalambu akho asendaweni ekahle (elangeni eliqondile, kude nethunzi noma embozwe izitshalo) kungasiza ekuqinisekiseni ukuthi enza kahle kakhulu.
Uma ukhathazekile ukuthi amabhethri akwezibane zakho asetshenziswa ngokweqile, cabanga ngokusetha isibali sikhathi samalambu noma ukuwacisha kanye / noma ukuwabeka kude isikhathi esithile. Ungahle uthande ukuhlola izindawo ezimbalwa ezahlukahlukene ngaphambi kokunquma indawo ehlala njalo yamalambu akho.
3. Izeluleko zokuxazulula inkinga zokukhanya kwelanga
Ungakuthola lokho empilweni yakho yokukhanya, ukuthi uhlangabezana nezinkinga ezithile ngokusebenza kwazo.
Izinkinga ezijwayelekile zifaka phakathi ibhethri elifayo, ukukhanya okubuthakathaka ngenxa yokumuncwa ukukhanya kwelanga, noma ukungasebenzi kahle kokukhanya. Lezi zinkinga kungenzeka zibangelwe yiminyaka yokukhanya kwelanga lakho noma ukuhlanzeka kwamapaneli elanga uqobo.